Xog: Halka ay marayaan wadahadallada arrimaha doorashooyinka | KEYDMEDIA ONLINE
Xog: Halka ay marayaan wadahadallada arrimaha doorashooyinka
Shirka Madaxweynayasha Shanta Maamul Goboleed ee ka socda xerada Xalane ayaa wali lagu gaarin heshiis rasmi ah, waxaana wali taagan caqabado xooggan oo ku hor gudban shir madaxeedka soo socda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Shir ay maalintii Afaraad oo xariir ah xerada Xalane ku leeyihiin Madaxweynayaasha Maamullada Galmudug, Puntland, Jubbaland, Koofur galbeed, iyo HirShabeelle, ayaa wali is af garad buuxa laga gaarin ajandaha shir Madaxeedka soo socda.
Inkastoo la isla meel dhigay dhowr arrimod oo muhiim ah, ayaa hadana lagu guul dareystay in lagu heshiisyo qodabada looga doodi doono shir Madaxeedka, iyo qeyb ka mid ah shuruudaha ay wataan Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland.
Siciid Cabduullahi Deni iyo Axmned Maxamed Islaam, ayaa wali ku dhagan, go’aamkoodii ahaa in Farmaajo qoro waraaq uu ku caddeeynayo in uusan lahayn awood Madaxweyne rasmi ah iyo in guud ahaan Saamileyda siyaasadda loo ogolaado in ay ka qeyb qaataan shirka.
Dhinacdu waxa ay isla meel dhigeen in arrinta ammaanka xarunta shirka looga leexdo AMISOM, waxaana arrintaas loo saaray guddi soo gabagabeeya xaaladaha amniga la xariira.
Ilo xog ogaal ah, ayaa Keydmedia Online u sheegaya in lagu heshiiyay in Farmaajo uu gudaha teendhada shirku ka dhacayo la galo 18 Askari, halka Madaxda Maamul Goboleedyada loo oggol yahay min Shan askari.
Dhanka kale, Siciid Deni iyo Axmed Madoobe, ayaa ka fuqay go’aankoodii ahaa in Farmaajo uusan shirka gudoomin karin, waxaase wali la isku fahmi la’yahay arrinta la xariirta amniga guud ee Doorashooyinka dalka.
Waxaa la rajeynayaa inuu baaqo kulankii loo ballansanaa birri ee shir Madaxeedka, kaas oo hore loo qorsheeyay inuu dhaco Talaadada birri ah. Waxaa caawa socda dadaallo la isku dayayo in kulanka Shir Madaxeedka uusan dhaafin maalinta arbacada ah soo aaddan.
Guddoonka Golaha Shacabka ayaa dhankooda maanta yeeshay kulan qaatay waqti badan waxayna ka arrinsadeen xaaladda ka taagan baarlamaanka iyo kulanka Arbacada.
Ujeedka kulanka Golaha Shacabka looga wareejiyay Isniinta ee Arbaca dib loogu dhigay ayaa lagu sheegay in laga war sugayo kulankii shir madaxeedka ee la filayay inuu dhaco birri oo talaado ah.
Lama oga inuu dhici doono kulankaas Golaha Shacbka Maalinta Arbacada, maadaama uu yahay kulan ay Madaxtooyadu soo abaabushay oo la xiriira go’aanka ka soo baxa Shirka wadda Tashiga qaran.
Madaxweynayaasha Galmudug, HirShabeelle iyo Koofur Galbeed, oo u kala dab qaaadaya Madaxtooyada iyo Mucaaradka ayaa caawa dib ugu laabtay Farmaajo si ay ula wadaagaan qodabadii maanta la jeexjeexaay.